“Waxaan aaminsanahay Maurizio Sarri” – Gool FM
(Chelsea) 21 Jan 2019. Difaaca reer Brazil iyo kooxda Chelsea ee David Luiz ayaa ka hadlay macalinka haatan Blues ee Maurizio Sarri, oo dhawaanahan la kulmay dhaleecooyin badan sababa la xiriira hoos u dhac ku yimid qaab ciyaareedka kooxda.
Chelsea ayaa sabtidii kala kulantay guuldaro 2-1 kooxda Arenal kulankii ahaa London derby ee horyaalka Premier League.
Hadaba David Luiz ayaa wareysi uu dhawaan bixiyay waxaa soo xigatay shabakada Sky Sports wuxuuna yiri:
“Maurizio Sarri ma uusan faraxsaneen kadib ciyaarta, anagana sidoo kale, qof walba wuxuu ka murugeysnaa guuldaradii Arsenal, sababtoo ah ma aanan ciyaarin kulan wanaagsan, mana aanan u soo muuqan sidii caadiga ahayd ee nalagu yaqiinay”.
“Waxaa ina heysata dhibaato weyn, waxaan si wanaagsan kaga bilaaweynaa weerarka, dhanka goolka, difaaca, ilaa iyo khadka dhexe, laakiin waxay dhibaato ka jirtaa dhanka dhameystirka weerarka, waxaana muhiim ah in si dhaqsi ah lagu xaliyo”.
“Isbedelka joogtada ah uma wanaagsana kooxda, sidaas darteed waxaan ku kalsoonahay istaraatiijiyadda macalinkeena hadda ee Maurizio Sarri, waana inaan horumar sameynaa”.
“Waxaan ku qasbanahay inaan wax walba u sameyno sida ugu fiican ee suurtagalka ah, taasi waa waxa waajiibka ah ee nalaga doonayo inaan sameyno”.
“Waxa uu haatan sameeyay Maurizio Sarri waa waxaan la rumeysan Karin, in ciyaartoyda ay fahmaan qaab ciyaareedkiisa, kadib markii ay ahaayeen xili ciyaareedkii lasoo dhaafay kuwo ciyaarayay kubada ka duwan, waa kuwa tartamaya, waxayna fadhiyaan booska 4-aad, taasina waa mid cajiib ah, Manchester City iyo Liverpool waxay u baahdeen waqti ku filan”.